Naples (kusuka esiGrekini kusho "idolobha elisha"), etholakala eningizimu ye-Italy. Ngobukhulu kuwukuthi indawo yesithathu, ulandela iRoma ne-Milan. Naples has a ehlukile umlando, amasiko ngisho lapha abantu bakhulume ulimi lwesigodi ekhethekile, engasatholi ukuhlangabezana kuphi. Lo muzi limelela injabulo nobuhlungu ngezikhathi kokudabula Italy. Naples ubizwa nangokuthi "yaseshashalazini wokuphila", ngoba lapha ngezikhathi kudlalwa nemicimbi nokubaluleka okungokomlando nezombusazwe sina. Futhi lo muzi imilingo kuyinto ozithandayo iholidi izigidi zezivakashi. Minyaka yonke, eningizimu ye-Italy abahambi zivela emhlabeni wonke emoyeni wokungenisa izihambi, imfudumalo touch wendawo.
Namuhla, eningizimu edolobheni Italian kuyinto isikhungo esiyinhloko nezokuphatha Campania esifundeni, okuyinto ekhaya (uma sicabangela nedlelo) zezakhamuzi ezingaphezu kuka-3 million. Umlando laseNaples iqala BC VIII leminyaka. e., lapho amaGreki asendulo eyasungulwa settlement Parthenopaeus. Ukuze amaRoma uphasiswe ngonyaka 327 BC. e., ababenako edolobheni kwaze kwaba sekhulwini VI, inqobo nje uma kungenziwanga ehlaselwa waseByzantium. Phakathi VII XII ubudala athuthukile ngesivinini eNaples. Ekuqaleni, waba inhloko-dolobha ye-Duchy of Naples, bese ingxenye yayo, futhi ekugcineni le-dolobha yombuso yeSisili. Ngo 1224 Naples ithole inyuvesi lalo. Ekhulwini XVII, ke eqhosha ethi idolobha lesibili ngobukhulu e-Europe, e-Italy. Naples selingaphezu Ubukhulu engakaze ibonwe, kwakukhona abantu abangaba ngu-300 000.
Kanjani ukuze uthole indawo?
Ngo-Naples ungafinyelela yinoma yimuphi imodi yezokuthutha. Lena elikhanyayo, idolobha amatasatasa, kulula ukufinyelela zabahamba elwandle emoyeni nezwe. Airport 'Capodichino' Naples ingenye ngobukhulu e-Italy, kubalulekile kuwo wonke zokungcebeleka wezwe eningizimu. Nsuku zonke, kuthatha omningi zesifunda, kuzwelonke nasemhlabeni wonke izindiza. Abathandi navigation has isevisi isikebhe noma umkhumbi. Kusukela port Naples ungaya Olbia, Cagliari, Sorrento, Palermo nakwamanye amadolobha.
Through the resort siphela kujantshi yokuxhuma ukusuka enyakatho uye eningizimu ye-Italy. Ngu isitimela eNaples kusuka kunoma iyiphi okuyidolobha kuleli zwe. Izitimela ukusebenzisa phakathi zokungcebeleka ethandwa. Naples ixhunyiwe ngebhasi nge emadolobheni amaningi Italian ngisho European. Ekhatsi Piazza Garibaldi itholakala ibhasi esiteshini. Bus - lokhu ingenye indlela elula kakhulu futhi ukonga ukufika emadolobheni ezifana eRoma, Salerno, Lecce, Bari, eMilan, uPompey, Taranto nabanye. Indlela elula kunazo travel ukuhamba e-Italy ngo imoto eqashiwe. Hlobo luni ezokuthutha ukukhetha - incike izintandokazi zezivakashi.
Nganoma yisiphi isikhathi onyakeni abheke phambili neNtaliyane libalele. Naples inikeza Ukukhetha eziningi lwamahhotela yezihambi. Inani iyahlukahluka kuye ngokuthi indawo yabo. Ngokwesibonelo, amafulethi eqolo zitholakala kwaleli chibi, futhi eshibhe - engxenyeni zomlando zomuzi. Ngo-Naples kukhona nhlobo amahhotela lezinkanyezi ezingu-3, abuye 4-5 kuphela 1-2 izinkanyezi. Uma ufuna uphumule benethezekile futhi bengakhokhi kakhulu, kangcono ukuqasha ifulethi esifundeni mlando. Ukunikeza ukufinyelela okulula kwaleli chibi, iya ku hambo kwamanye amadolobha. Abavakashi ukuncoma ehhotela Partenope Relais, esisogwini chibi. Futhi okudume kakhulu UNA Ihhotela Napoli, isenkabeni yedolobha. It has idumela elihle kanye Ihhotela Piazza Bellini, okuyinto ingatholakala zomlando okuyingxenye.
izitsha Italian kukhona abalandeli babo emhlabeni jikelele. Ngakho-ke nje abanazaba ukuya Naples futhi akazange ukunambitha zonke ethandwa kakhulu okujabulisa Culinary yaleli zwe elihle. Pizza - kungcono abanothando zabantu base-Italy. chef ngamunye ewulungiselela ke ngendlela yakhe, ngokuletha iresiphi yendabuko gqamisa. Pizzerias, izindawo zokudlela, amathilomu bagcwele zonke izingxenye zedolobha. Lezi izikhungo ethokomele ukuze obuncani eqotho imali kanye feed esihlwabusayo ngisho izivakashi olindele kunazo.
chef Italy ukunikela Ukukhetha enkulu kwasolwandle izitsha. Kasibili wonke umuntu uyakuthanda sandwich zendawo ukuthi ingase ikhishwe kanye neziphuzo ezibandayo i-isidlo ukukhanya. Libuye pay kuwufanele ukunakekela iwayini, ukunambitheka kwabo zikaNkulunkulu ngeke abashiye ubani nandaba. izinyo elimnandi uyomangala ngu amaswidi okumnandi no-ayisikhilimu. Naples wonke umuntu wakhumbula izitsha yasekuqaleni, isimo ethokomele of zokudla nezindawo zokudla. AmaNtaliyane nikwazi ukupheka ukudla okumnandi nje kuphela, kodwa futhi ezithakazelisayo eyibukisa.
The yokungcebeleka idume hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa bemvelo esikhumbuzo yezakhiwo yesikhathi esidlule, kodwa futhi ezindaweni yezitolo. Lapha basuke bagxila izitolo brand - "Gucci", "Armani", "Ferragamo" nezitolo abavamile lapho ungakwazi ukuthenga engabizi, kodwa izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu futhi izingubo amahle izicathulo. I yekucala zonke shopaholics kubhekwe Galleria Umberto, lokhu lapho inani elikhulu zezikhumbuzo nezitebele zamahhashi kanye boutiques. Futhi kuwufanele uhambo emigwaqweni yezitolo ezifana Via Chiaia (idume kuqhathaniswa eziphansi lento), Via Calabritto - ekuqongeleleni omele lemikhiqizo emhlabeni wonke, Via Roma - 3 km ukuba umthambo commercial laseNaples. Eduze komuzi kukhona Izitolo eziningana kuyo ngezithukuthuku izaphulelo ungathenga izinto uphawu ngamanani akhokhelekayo.
Catacombs - "Hayidesi"
Naples Isikhathi fly by uma sina ukuhlola ezikhangayo wendawo. Catacombs - yindawo lapho kukhona ukuthula, ukuthula, isimo izimfihlo kanye izimfihlakalo. Ngaphansi izindlu ezigcawini zomuzi ezingaphezu kuka-700 emigedeni, imigudu nemipheme, amakhulu amaningi eminyaka, izakhamuzi zisusiwe tuff zabo ukuze kwakhiwe le nqaba izindonga, tikwele amasonto. Catacombs kukhona ethempelini lasendulo komhlaba, amathuna isiko, imisele yamanzi nezindawo eziyisikhumbuzo ka amaRoma asendulo, emihumeni amaGreki, imigudu, emihubheni osithekile Bourbons. Abavubukuli lapho bemba lapha kutholakala izinto abaneminyaka engama 5000. Catacombs San Gennaro kukhona amathuna ababhishobhi okuqondene owawukhona ngesikhathi samaKristu okuqala. Futhi, izivakashi bayamenywa ukubheka yasezindongeni eziningi futhi stelae.
Tour of the Archaeological Museum
Abathandi umlando endulo futhi anqobe Naples ahlukahlukene. Izithombe eNational Archaeological Museum nemibukiso yayo ngeke ukwanelisa izivakashi hhayi kuphela abajwayelekile, kodwa futhi abacwaningi abagogodile. Lena elaliyisikhungo esibalulekile kwamasiko hhayi kuphela e-Italy kodwa emhlabeni wonke. The mnyuziyamu lenqwaba amaqoqo Roman ngabanye nasezintweni ezazisetshenziswa kudala ngesiGreki. Lesi sakhiwo uqobo futhi inani yezakhiwo. Yakhiwa 1586. Esitezi iqukethe ebaziwe basendulo. Phakathi zesitezi sokuqala nesesibili Kuye kwatholakala phakathi kumbiwa Pompei KaMose. Kasibili zonke izivakashi phansi umxhwele yesibili, lapho ihholo sethempeli Isis kanye ehholo nemidwebo.
Kakhulu eyingqopha ezithakazelisayo iyona Castle of the Egg, futhi Castel del Ovo. Ngokusho yetinsita imbongi Virgil wakhuluma amaqanda, wakufaka i amphora futhi isitsha - i yezinyoni yensimbi, okuyinto wangcwatshwa esiqhingini Magaride lapho esakhiwe castle ungenakunqotshwa. Idolobha ngeke ubhujiswe nje iqanda ihleli kahle. Kungenxa yokuthi lokhu legend enqabeni lethiwa. Namuhla, Castel dell'Ovo kuyinto eyinkimbinkimbi imibhoshongo yamakhambi nangenkathi ezahlukene. Le nqaba lakhiwa 1139, ekhulwini XVII ke aphenduka ejele, kodwa manje livulekele izivakashi.
Castel Nuovo, noma Donjon ka Anjou, ubhekwa okwamanje ngomunye futhi umsebenzi wobuciko yezakhiwo Oziqhayisayo Italy. Naples kwake kwaba inhloko-dolobha yombuso yeSisili, ngakho uKarl Anzhuysky eyakhelwe yokuhlala lapha. Le nqaba yakhelwa esiyiminyaka emihlanu kusukela 1279 at 1284. Le nqaba trapezoid nge imibhoshongo eqinile round ukuma emagumbini. Kukhona i-portal ezenziwe ngemabula, ke lihlotshiswe imifanekiso kanye eziqoshiwe.
Okunye ezindaweni ezithakazelisayo
Ngisho nabantu abasontayo belulekwa ukuba uvakashele Cathedral of San Gennaro. Isonto liye wabeka Karl Anzhuysky, belinikezela umxhasi yasezulwini edolobheni. Umqhele isakhiwo yayisikhona umzukulu wenkosi - URobert. Cathedral ekuhlaba umxhwele izivakashi nge yomhlobiso wawo futhi ecebile. amakhosi abadumile Italy wahlanganyela yomhlobiso wawo. Ukukhangana main wethempeli - esibuthakathaka ngegazi saint, okuyinto kokuvalelwa 17 emakhulwini eminyaka adlule.
Enye indawo ezithakazelisayo ukuvakashela kuyinto iRoyal Palace, elakhiwa ngaphezu kwesigamu kwekhulu. Lena omkhulu esinezitezi ezintathu, eyenziwe isitayela ngasekupheleni Renaissance. Lesi sigodlo lihlotshiswe eziqoshiwe Equestrian, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu King of eNaples. Abobulili isakhiwo kukhona Basilica of San Francesco di Paola, eyakhelwe imodeli ababaziwa wamaRoma. I ingaphakathi lethempeli lihlotshiswe imidwebo eminingi, nemidwebo kanye eziqoshiwe. It is ibuye Kunconywa ukuvakashela igalari Umberto I. Lena omkhulu yezitolo kwekhulu XIX, elakhiwa ngo isitayela neoclassical. Naples Imephu Italy kufanele uthole okungenani ukuze ujabulele ezikhangayo zendawo, ungene isiko nomlando ongaqondakali zwe elinezinto ezihlukahlukene.
Izinto okumele uzenze eNaples?
Ngo eningizimu ye-Italy akazange kufanele unesizungu, Ilanga elihlale libalele efudumele ine yokuchitha isizungu asebenzayo. Abavakashi uphiwa eziningi ezihlukahlukene izinkambo, phakathi lapho kukhona ezithakazelisayo, ulwazi, ngisho kakhulu. E-Italy, kukhona izindawo ukuya khona nokuthi yini ukubona, ngoba iyizwe eminyaka yomlando namasiko, uhlobo isiko. Ngo-Naples, ungavele enyuka isikhungo esingokomlando, sibheke impilo abendawo futhi ujabulele emigwaqweni emincane. Futhi lapha ungakwazi ukuyothenga, ngokunambitha pizza nezinye izitsha bendabuko. Yini ukubona eNaples, uzothola ngokuphelele zonke izigaba zezivakashi. Ngemuva kokuvakashela umuzi kanye, nakanjani ufuna ukuza lapha kaningi.
Iphrinta Kyocera-2035: izici ukubuyekezwa kanye nokuhlela. Kyocera-2035 iphutha nokuqeda zabo